कसरी पत्राचार र सभामा केटी माथि मज्जा गर्न
आजकल जवानहरू सडक मा इन्टरनेट मार्फत यो गर्न रुचि गर्छन सिनेमा वा पुस्तकालयमा, थाह गर्न कम संभावना छ। निस्सन्देह, भर्चुअल संचार - यो धेरै सुविधाजनक, विशेष गरी एक मान्छे व्यक्तिमा उनको भावना केटी स्वीकार गर्न लजालु छ भने किनभने, त्यसपछि तिनीहरूलाई बारेमा उनको लेख्न सजिलो छ।
तथापि, छोराका एक विशाल संख्या मात्र जवान महिला प्रेम बारेमा लेख्न कसरी, तर पनि बारेमा कुनै विचार केटी माथि मज्जा कसरी गर्ने पत्राचार मा। तैपनि, जवान मान्छे को आत्म-विश्वास बढ्दै छ, र कुनै हतारमा यो केटी संग समानान्तर मा जो मानक विधिहरू प्रयोग ती थाह प्राप्त गर्न। विशेष, यदि Lovelace सामाजिक सञ्जाल मा पहिलो वाक्यांश: "हाय! कसरी तपाईं? "- यो ढाँचा दस बाहिर एक मामला मा काम गर्नेछ।
जवान मानिसहरू कसरी यो बस अचानक उनको साथी नेटवर्क देखा गर्नुभयो जब ठाउँ नै फेला पार्न सक्छ भनेर होइन पत्राचार मा केटी मज्जा थाहा गर्न उपयोगी हुनेछ किन छ। सम्भव छ? निस्सन्देह, हो। तपाईं प्रश्न समाधान गर्न सक्छन् जो मार्फत धेरै प्रभावकारी तरिकाहरू छन्: "? कसरी पत्राचार मा केटी मज्जा गर्न" हामीलाई थप विवरण तिनीहरूलाई जाँचौं।
तपाईंलाई थाहा छैन भने कसरी केटी माथि मज्जा गर्न को पत्राचार मा, प्रधान नियम सम्झना: तपाईं पहिलो वाक्य चाखलाग्दा साथी छ। तर, पनि यदि यो सम्भव छैन तपाईं तुरुन्तै आतंक, र उदास गर्नुपर्छ। यो तपाईं बस Paperback छैन हिरो भनेर सम्भव छ, र यो लामो प्रेम मा भएको छ। साथै, उनको रिसाएको र अशिष्ट प्राप्त छैन। तपाईं क्षणमा केटी कारण त्यो पारिवारिक समस्या वा काममा समस्याहरूको थियो भन्ने तथ्यलाई तपाईं संग कुराकानी गर्न जारी राख्न चाहनुहुन्छ गर्दैन संभावना स्वीकार छ। त्यो तिमी संग अनुरूप आपत्ति छैन, तर अहिले सही समय छैन।
"के मज्जा नारी" कुलपति "": स्वाभाविक, जवान मान्छे को धेरै भन्दा हैरान?
पहिले नै माथि जोड दिए रूपमा, "तपाईं सुन्दर छन्" वा जस्तै hackneyed वाक्यांश जोगिन "तपाईं के गर्नुहुन्छ।" मूल हुन। तपाईंको शब्दहरू उनको हास्यास्पद वा निरर्थक के देखिन्छ को नडराऊ। कि हास्य विश्वास - विपरीत सेक्स थाह रही सबैभन्दा प्रभावकारी हतियार हो। उनको एक स्माइली पठाउन छ - तपाईं हास्य को एक अर्थमा छ कि interlocutor देखाउन सजिलो विकल्प। निस्सन्देह, हंसी मा रोक्न गर्दा थाहा गर्नुपर्छ वा त्यो कुराकानी गर्न भविष्यमा तपाईं चाहनुहुन्छ सक्छ।
तपाईं आत्म-पदोन्नति गर्न आवश्यक छैन
मलाई कुनै एक मानिस दावा गर्दा रुचि विश्वास र बालिका कि दुई पटक रुचि छैन। यदि हामी तपाईंलाई ठूलो मूल हो, र तपाईं लाभ को धेरै छ कि दोहर्याउँदै को टायर छैन, यो उनको पक्षमा मा गणना गर्न सक्षम हुन असम्भाव्य छ। तपाईंको व्यक्तिको बारेमा निष्कर्ष आकर्षित गर्न नै यसलाई छोड्नुहोस्। यो उनको जीवन विषयमा धेरै प्रश्न राम्रो छ।
तपाईं बहुमुखी व्यक्तित्व हुन् भनेर प्रमाणित
वैविध्यपूर्ण चासो भएका मान्छे जस्तै बालिका।
तपाईं एक व्यापक दृष्टिकोण छ कि उनको देखाउन। यो केटी ', रुचि छैन भनेर खैर, एक पटक bouncer, तपाईंले unobtrusive तरिका मा भने राम्रो हुनेछ! "
केटी मान्छे बारेमा सकारात्मक छाप आश्चर्य को प्रभाव हुन सक्छ छ। जब उनले सबैलाई कम्पनी को प्राण रूपमा मानिन्छ र जुन बिना यो नीरस र कुनै पनि छुट्टी अनिच्छुक हुनेछ जसलाई जवान, पूरा गर्दछ। निस्सन्देह, त्यो मात्र यसलाई आफ्नो वातावरण के सोच्छ आधारमा नयाँ ज्ञान को पहिलो प्रभाव बनाउन सक्छ। त्यो पनि उहाँले एक जोकर र मनोरंजन छ कि सोच्छ। एकै समयमा, तिनीहरू नजिक चिन्न गर्दा अचानक बाहिर फेला उनको साथी मात्र तपाईं हाँस्न बनाउन सक्दैन, त्यो पनि हृदयस्पर्शी कविता रचना गर्न। तब तिनीहरूले कुराकानी को विषय नयाँ, एक जवान मा रुचि को बालिका दुगुना छ।
सामाजिक सञ्जाल जवान मानिसहरू को संचार, तपाईं अधिक विस्तृत सहायता शेयर फोटो, अडियो र भिडियो फाइलहरू, र यसपछी पाउन सक्नुहुन्छ भने भिन्न हुन सक्छन्। यो तरिकामा interlocutor को चासो को स्कोप र आफ्नो देखाउन। साथै, केटी रोमान्टिक संगीत पठाउन बैठक निमन्त्रणा एक प्रकारको हुन सक्छ।
चासो को समुदाय
संचार रमाइलो हुन र interlocutors आनन्द र कुनै पनि मामला मा पीडादायी हुँदैन।
साधारण यकीन हुन , कुराकानी शीर्षकहरू तिनीहरूले र रुचि हो कि मान्छे र केटी। नयाँ मित्र तपाईंको आफ्नै जीवन देखि एक सानो उपाख्यान वा हास्यास्पद कथाहरू लेख्न, उनको त्यो, को सिनेमा जाँदै मनपर्यो पुस्तकहरू पढेर खेल खेल्दै कि र त्यसैले, त्यो आराम गर्न रुचि कहाँ, के त्यो रुचि थियो सोध्नुहोस्।
त्यसपछि टाढा, यो नजिक राख्न: जवान महिला कुरा, निम्न सिद्धान्त प्रयोग गर्नुहोस्। विशेष मा, अचानक एक दिन को लागि गायब केटी संग गहन पत्राचार दुई दिन, तर पछि पछि उनको अनुपस्थितिमा मान्य कारण व्याख्या (उदाहरणका लागि, बन्द इन्टरनेट कटौती, वा नातेदार भ्रमण गर्न यात्रा)।
सम्झना आफ्नो परम लक्ष्य कि - बनाउन त्यो निरन्तर तपाईं को सोच र तपाईंसँग जानेबेलामा को विचार अनुमति थिएन थियो पक्का!
जवान मानिसहरू एक विशाल नम्बर फोनमा केटी माथि मज्जा गर्ने बारे चिन्तित हुनुहुन्छ। सबैभन्दा लोकप्रिय तरिका - यो प्ले छ। उदाहरणका लागि, एक प्रार्य गठन उच्चारण आवाज मदतको लागि उनको सोधे। विकल्पहरू धेरै यहाँ, रचनात्मक कल्पना आवश्यक देखाउन बस। तर, आफ्नो रेखाचित्र अहानिकारक हुन छ कि सम्झना।
केही दुःखी केटी माथि मज्जा कसरी प्रश्न फिक्री। जवाफ banality गर्न सजिलो छ। उनको फूल को एक फूलगुच्छा दिन, र त्यो तपाईं मा मुस्कान हुनेछ।
धेरै जवान मानिसहरू एक पैदल लागि केटी माथि मज्जा गर्ने बारे कुनै पनि विचार छैन। तिनीहरूलाई तपाईं के सल्लाह गर्न सक्छन्?
मिति मा जा, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो - के तपाईं साँच्चै हो जो हुन, र अर्को व्यक्ति को मास्क धारण गर्न प्रयास। एक मान्छे भने - रोमान्टिक छैन, विपरीत केटी प्रमाणित गर्न कुनै अर्थमा छ। को fairer सेक्स सधैं सज्जन उहाँले आवश्यकता को उपाख्यान बताउँछ हुँदा, यसको आफ्नै पहल मा ठट्टा थियो लाग्छ। त्यसैले, एक विनोदी कथा सधैं केटी गरेको हास्य सक्छ।
एक जवान व्यक्ति भने - Merry छैन, त्यो भूमिका प्रयास गर्नु हुँदैन भनेर। उहाँले आफ्नो बाल्यकाल, मनोरञ्जन, सोख बारेमा केटी राम्रो कुरा भएको थियो। मलाई निष्कपट जवान मान्छे जस्तै जवान महिलाहरु विश्वास।
र, को पाठ्यक्रम, पुरुष दर्शक नारी शब्द मज्जा कसरी प्रश्न रुचि को एक विशाल भाग। फेरि, सबै भन्दा banal - एक उपाख्यान बताउन छ। तर साँच्चै रमाइलो र रोचक थियो, स्मार्ट हुन प्रयास गर्नुहोस्। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं हेलियम बेलुन संग अग्रिम शेयर र केटी केही हास्यास्पद कथा बताउन तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सहमत, यो एउटा मूल र असामान्य छ!
प्रेम लागि प्रार्थना - आफ्नो व्यक्तिगत जीवन व्यवस्थित गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका
मान्छे जस्तै Girls पूर्ण? स्टेरियोप्रकारदेखाउनुहोस् र तथ्य
बच्चाहरु sausages: घर मा नुस्खा। घर sausages
"Glies Chur" कम्पनीबाट "तरल रेशम" कपालको लागि
छोराछोरीको चेचक लक्षण - यो सबै आमाबाबुले थाह हुनुपर्छ
प्रसिद्ध श्री Heisenberg - यो हुनुहुन्छ?
क्रास्नोडार क्षेत्र, गाउँ Dolzhanskaya: अवकाश, समीक्षा
पराग। आवेदन गुण